Bit By Bit - ဆိုင်ရာကိုယ်ကျင့်တရား - 6.6.1 သဘောတူချက်
သုတေသီများ, နိုင်သင့်ပါတယ်, နှင့်အုပ်ချုပ်မှုအတိုင်းလိုက်နာပြုပါဆုံးသုတေသနအတွက်ခွင့်ပြုချက်အချို့ကိုပုံစံ။
သဘောတူချက်ဟာအခြေခံစိတ်ကူး-အချို့သောတစ်ဦးအနီးအပါးစွဲဆိုရစေခြင်းငှါ, ဖြစ်ပါတယ် (Emanuel, Wendler, and Grady 2000; Manson and O'Neill 2007) သုတေသနလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်နှစ်ဆပိုများလာ။ သုတေသနလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်၏အရိုးရှင်းဆုံး version ကိုပြောပါတယ်။ "အရာခပ်သိမ်းအဘို့အသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်" ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့စည်းမျဉ်း, သို့သော်, လက်ရှိကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအခြေခံမူများ, ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်း, ဒါမှမဟုတ်သုတေသနဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်နှင့်ကိုက်ညီသည်မဟုတ်။ အဲဒီအစား, သုတေသီများ, နိုင်သင့်ပါတယ်, နှင့်တစ်ဦးပိုမိုရှုပ်ထွေးအုပ်ချုပ်အတိုင်းလိုက်နာကြပါ။ "အများဆုံးသုတေသနအတွက်ခွင့်ပြုချက်အချို့ကိုပုံစံကို"
ပထမဦးစွာသိရှိခွင့်ပြုချက်နှင့် ပတ်သက်. အလွန်အမင်းရိုးရှင်းတဲ့အိုင်ဒီယာထက်ကျော်လွန်ရွှေ့ဖို့အမိန့်၌ငါသည် (ဤအဖြစ်ကိုကောင်းစွာအခန်း4မှာတစ်နည်းနည်းဖုံးလွှမ်းခဲ့သည်) ခွဲခြားဆက်ဆံမှုလေ့လာဖို့လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်ချက်အကြောင်းပိုမိုသင်ပြောပြချင်။ ဒီလေ့လာမှုတွေထဲမှာမတူညီတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများ-ထိုကဲ့သို့သောယောက်ျားမိန်းမတို့သည်-လျှောက်ထားကွဲပြားခြားနားသောအလုပ်အကိုင်အဘို့အဖြစ်ရှိသည်သောသူ, အတုလျှောက်ထား။ လျှောက်ထားသူတဦး type ကိုတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်းမှာငှားရမ်းထားရရှိလိုလျှင်, သုတေသီများငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိစေခြင်းအလိုငှါကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ ဤအခနျး၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဤစမ်းသပ်ချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးအပါဆုံးအရာကဤစမ်းသပ်ချက်-The အတွက်သင်တန်းသားများကိုခွင့်ပြုချက်ပေးအလုပ်ရှင်များ-ဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့အဲဒီသင်တန်းသားများကိုတက်ကြွစွာအတု applications များအားဖြင့်လှည့်ဖြားကြသည်။ သို့သျောလညျး, ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုလေ့လာဖို့လယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက် 17 နိုင်ငံများတွင်အနည်းဆုံး 117 လေ့လာမှုများအတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြ (Riach and Rich 2002; Rich 2014) ။
ခွဲခြားဆက်ဆံမှုလေ့လာဖို့လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်ချက်ကိုသုံးသောသူသုတေသီတွေကစုပေါင်း, သူတို့ကို Ethics ခွင့်လုပ်ကြောင်း, ဤလေ့လာမှုလေး features တွေကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ: အအလုပ်ရှင်များမှ 1) ကန့်သတ်ထိခိုက်မှု, ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း,3၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောအတိုင်းအတာရှိခြင်း၏ 2) ကြီးမြတ်လူမှုရေးအကျိုးအမြတ်) အားနည်းခြင်း အခြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုတိုင်း၏နည်းစနစ်များနှင့်လှည့်စားပြင်းပြင်းထန်ထန်က setting ကို၏စံချိန်စံညွှန်းမချိုးဖောက်မိ 4) တကယ်တော့၏ (Riach and Rich 2004) ။ ဤအခြေအနေများအသီးအသီးဝေဖန်ဖြစ်ပါသည်, သူတို့နှင့်မဆိုစိတ်ကျေနပ်မှုမပြဘူးသည်, ထိုကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကိစ္စပိုပြီးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ ကန့်သတ်ထိခိုက်မှု (Persons နှင့်ကောင်းတဲ့အများအတွက်လေးစား) နှင့်အလွန်အကျိုးရှိနှင့်အခြားနည်းလမ်းများ (ကောင်းတဲ့အများနှင့်တရားမျှတမှု) ၏အားနည်းချက်: ဤအင်္ဂါရပ်သုံးခုအတွက် Belmont အစီရင်ခံစာအတွက်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအခြေခံမူများမှဆင်းသက်လာနိုင်ပါသည်။ နောက်ဆုံးအင်္ဂါရပ်, contextual စံချိန်စံညွှန်းများသည် non-ချိုးဖောက်မှု, ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားများအတွက် Menlo အစီရင်ခံစာရဲ့ရိုသေလေးစားမှုကနေဆင်းသက်လာနိုင်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အပလီကေးရှင်းဖြစ်နိုင်သောပရိယာယ်အချို့ကိုမျှော်လင့်ထားပြီးသားရှိပါတယ်တဲ့ setting ကိုဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ဤစမ်းသပ်ချက်တခုပြီးသားယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာရှုခင်းညစ်ညူးစေကြပါဘူး။
ဒီအခြေခံမူ-based အငြင်းအခုံအပြင်, IRBs များစွာလည်းဒီလေ့လာမှုတွေအတွက်ခွင့်ပြုချက်၏မရှိခြင်းအထူးသဖြင့်အသုံးများသောနည်းဥပဒေ§46.116, အပိုင်း (ဃ) တွင်, ရှိပြီးသားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အမေရိကန်တရားရုံးလည်းခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုတိုင်းတာရန်လယ်ပြင်စမ်​​းသပ်ချက်အတွက်သဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့်အလှည့်စား၏မရှိခြင်းထောက်ခံကြပါပြီ (နံပါတ် 81-3029 ။ အယူ​​ခံ၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတရားရုံး, သတ္တမတိုက်နယ်) ။ ထို့ကြောင့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလယ်ပြင်စမ်​​းသပ်ချက်များအသုံးပြုခြင်းလက်ရှိကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအခြေခံမူများနှင့်လက်ရှိစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ (US မှာအနည်းဆုံးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို) နဲ့ကိုက်ညီသည်။ ဒီဆင်ခြင်ခြင်း IRBs များစွာနှင့်အယူခံအမေရိကန်တရားရုံးအသုံးပြုပုံကျယ်ပြန့်လူမှုရေးသုတေသနဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းကထောက်ခံခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့ရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းကိုငြင်းပယ်ရမယ် "ခပ်သိမ်းသောအဘို့အသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်။ " ဒီသုတေသီများကအတိုင်းလိုက်နာတဲ့အုပ်ချုပ်မှုမကသုတေသီတွေကအတိုင်းလိုက်နာသင့်သောစည်းကမ်းဖြစ်ပါတယ်။
"ခပ်သိမ်းသောအဘို့အသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်" ကျော်လွန်ရွေ့လျားခက်ခဲတဲ့မေးခွန်းနှင့်အတူသုတေသီများအရွက်: သဘောတူညီခကျြအဘယ်သို့ပုံစံများကိုသုတေသနပြုချက်အဘယ်သို့အမျိုးမျိုးအတှကျလိုအပျကွသနညျး ဒါကြောင့်အများစုက Analog စအသက်အရွယ်အတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသန၏ဆက်စပ်၌ရှိ၏ပေမယ့်သဘာဝ, ဤမေးခွန်းပတ်ပတ်လည်သိသိသာသာကြိုတင်ဆွေးနွေးငြင်းခုံရှိပါသည်။ ကြောင်းအငြင်းအခုန်စုစည်းတင်ပြရန်, Eyal (2012) ကရေးသားခဲ့သည်:
"ဒီကပိုအန္တရာယ်များသည့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု, ပို. တကမြင့်မားသောသက်ရောက်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်သော '' အရေးပါတဲ့ဘဝရှေးခယျြမှု '' သည်, ပို. ကတန်ဖိုးမြှင်ဆောင်သောနှင့်အငြင်းပွားဖွယ်ခြင်း, ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်သောကိုယ်ခန္ဓာ၏ပိုပြီးပုဂ္ဂလိကဧရိယာ, အပို ခိုင်မာတဲ့အသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းမြင့်, ပဋိပက္ခနှင့်ထို Practitioner unsupervised ။ အခြားအခါသမယတွင်အလွန်အားကောင်းတဲ့သဘောတူချက်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းနှင့်အမှန်ပင်, မည်သည့်ပုံစံ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်အဘို့, ပြောင်သည်။ သူတို့အားအခါသမယတွင်မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်ကိုအလွယ်တကူကြောင်းလိုအပ်ချက် override လိမ့်မည်။ "[ပြည်တွင်းရေးယင်းတို့ထဲမှဖယ်ထုတ်လိုက်]
ဒီမတိုင်မီဆွေးနွေးငြင်းခုံတစ်ဦးထံမှအရေးကြီးသောထိုးထွင်းသိမြင်သဘောတူချက်အားလုံးသို့မဟုတ်ဘာမှမမဟုတ်ကြောင်းဖြစ်၏ သဘောတူညီခကျြ၏ခွန်အားကြီးနှင့်ဆီးအတားမရှိပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ အချို့သောအခြေအနေများတွင်, ခိုင်မာတဲ့အသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်အခြားအခြေအနေများတွင်, ခွင့်ပြုချက်၏အားနည်းပုံစံများကိုသင့်လျော်စေခြင်းငှါ, လိုအပ်သောပုံရသည်, ဒါပေမယ့်။ Next ကိုငါသုတေသီများအားလုံးထိခိုက်နစ်နာပါတီများနှင့်ထိုကိစ္စများအတွက်အနည်းငယ်ရွေးချယ်စရာကနေအသိပေးခွင့်ပြုချက်ရရှိရန်ရုန်းကန်လိမ့်မည်ဘယ်မှာသုံးခွအေနမြေားကိုဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်။
ပထမဦးစွာတစ်ခါတစ်ရံအသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်ပေးသင်တန်းသားများကိုတောင်းသူတို့ရင်ဆိုင်ရသောအန္တရာယ်များကိုတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Encore အတွက်, သူတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာကအင်တာနက်ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုများတိုင်းတာခြင်းအတွက်အသုံးပြုရှိသည်ဖို့သဘောတူညီခကျြပေးဖိနှိပ်အစိုးရများအောက်တွင်နေထိုင်သောလူတောင်းတိုးမြှင့်အန္တရာယ်မှာသဘောတူသောသူတို့အားနေရာချခြင်းငှါ, ။ ခွင့်ပြုချက်တိုးမြှင့်အန္တရာယ်မှဦးဆောင်လာတဲ့အခါသုတေသီများသူတို့ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းအချက်အလက်တွေကိုအများပြည်သူနှင့်သင်တန်းသားများကိုရွေးချယ်ထွက်ရန်အဘို့အဖြစ်နိုင်ကြောင်းအာမခံနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သူတို့သင်တန်းသားများကို (ဥပမာ, NGOs များ) ကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းအုပ်စုများမှသဘောတူခွင့်ပြုချက်ကိုရှာကွနိုင်ဘူး။
ဒုတိယအချက်မှာလေ့လာမှုကစတင်ခဲ့သည်ခင်မှာတစ်ခါတစ်ရံတွင်အပြည့်အဝအသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်ရှိခြင်းလေ့လာမှု၏သိပ္ပံနည်းကျတန်ဖိုးကိုလျှော့ပေးလိုက်လျောနိုင်ဘူး။ သင်တန်းသားများကိုသုတေသီများစိတ်ခံစားမှုနှင့် ပတ်သက်. စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုပ်နေတာခဲ့ကြကြောင်းသိရလျှင်ဥပမာအားဖြင့်, စိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်အတွက်, ဤသူတို့၏အမူအကျင့်ပြောင်းလဲပြီပေလိမ့်မည်။ သင်တန်းသားများထံမှသတင်းအချက်အလက်များသိုထားသော, ပင်သူတို့ကိုလှည့်ဖြား, အထူးသဖြင့်စိတ်ပညာဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်အတွက်, လူမှုရေးသုတေသနတွင်အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ လေ့လာမှုတစ်ခုကစတင်ခဲ့သည်ခင်မှာအကြောင်းကြားခွင့်ပြုချက်မဖြစ်နိုင်ချေသည်ဆိုပါက, သုတေသီများတတျနိုငျသ (နှင့်အများအားဖြင့်ပြုပါ) ကိုလေ့လာမှုကျော်ပြီးနောက်သင်တန်းသားများ debrief ။ Debriefing ယေဘုယျ, အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်ရှင်းပြမည်သည့်ပျက်ဆီး remediating နှင့်အချက်ကိုပြီးနောက်သဘောတူခွင့်ပြုချက်ရယူထားခြင်းလည်းပါဝင်သည်။ အ debriefing ကိုယ်တိုင်ကသင်တန်းသားများအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်လျှင်လယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်အတွက် debriefing, သင့်လျော်သည်ဖြစ်စေအကြောင်းသို့သော်အချို့သောဆွေးနွေးငြင်းခုံ, ရှိပါတယ် (Finn and Jakobsson 2007) ။
တတိယအချက်, တစ်ခါတစ်ရံသင်တို့၏လေ့လာမှုအားဖြင့်ထိခိုက်လူတိုင်းထံမှသိရှိခွင့်ပြုချက်ကိုလက်ခံရရှိရန်ဖြစ်ဖြစ်လက်တွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ, Bitcoin blockchain လေ့လာဖို့ရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်းသူတစ်ဦးသုတေသီစိတ်ကူး (Bitcoin တစ် crypto-ငွေကြေးနှင့် blockchain ဖြစ်ပါသည်အားလုံး Bitcoin ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာစံချိန်တင်ဖြစ်ပါတယ် (Narayanan et al. 2016) ) ။ Bitcoin အသုံးပြုအချို့လူများကမျှော်လင့်ထားနှင့်အမည်ဝှက်အလိုရှိသောကို၎င်း, Bitcoin အသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်အချို့ဟာသူတို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအပေါ်သုတေသနပြုအချို့ပုံစံများကိုကန့်ကွက်ပေလိမ့်မည်။ ဤလူအများတို့သည်လည်းအမည်မသိကြောင့်ကံမကောင်းစွာပဲ, က Bitcoin ကိုအသုံးပြုတဲ့သူကိုလူတိုင်းကနေခွင့်ပြုချက်ရယူမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သုတေသီ Bitcoin အသုံးပြုသူတစ်ဦးနမူနာဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်နှင့်၎င်းတို့၏အသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်တောင်းရန်ကြိုးစားနိုင်ကြ။
ဤသုံးပါးသုတေသီများသဘောတူချက်-တိုးမြှင့်စွန့်စားမှုခံယူနိုင်မည်မပြုစေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်အကြောင်းရင်းများ, သုတေသနရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်မထိခိုက်စေနဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးသုတေသီများအသိပေးခွင့်ပြုချက်ရရှိရန်ရုန်းကန်ကြောင်းတည်းသောအကြောင်းပြချက်မန့်သတ်ချက်များ-ဖြစ်ကြသည်။ ထိုအခါငါအကြံပြု-အသိပေးပါတယ်ကြောင်းကိုသင်၏သုတေသနနှင့် ပတ်သက်. အများပြည်သူ, တတိယပါတီများထံမှသဘောတူခွင့်ပြုချက်, debriefing အပေါင်းတို့နှင့်တကွကိစ္စများတွင်ဖြစ်နိုင်ပါမဖြစ်-စေခြင်းငှါသင်တန်းသားများကိုတစ်နမူနာကနေသဘောတူခွင့်ပြုချက်ရှာဖွေလျက်စှာရှာသည့်ဘေးဖယ်ထုတ်အားဖွင့်ဖြေရှင်းနည်း။ နောက်ထပ်အဲဒီရွေးချယ်စရာတတ်နိုင်လျှင်ပင်, သူတပါးတို့သည်သင်တို့၏လေ့လာမှုအတှကျလုံလောကျမဖွစျနိုငျသညျ။ ဤဥပမာပြအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကို, သို့သော်, သဘောတူချက်အားလုံးသို့မဟုတ်ဘာမှမမရှိ, ဖန်တီးမှုဖြေရှင်းချက်အားလုံးထိခိုက်ပါတီများကနေအပြည့်အဝအသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်မခံမယူနိုငျသောလေ့လာမှုများ၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာချိန်ခွင်လျှာတိုးတက်စေနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
"။ အရှိဆုံးအရာများအတွက်သဘောတူညီခကျြအခြို့ကိုပုံစံတစ်မျိုး": သုတေသီများက "ခပ်သိမ်းသောအဘို့အသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်" နိုင်သင့်ပါတယ်, နှင့်တစ်ဦးပိုမိုရှုပ်ထွေးအုပ်ချုပ်အတိုင်းလိုက်နာပြုပါကောက်ချက်ချထက်မှအခြေခံမူ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ထုတ်ဖော်ပြောဆို, သဘောတူချက်အခြေခံမူများအတွက်လိုအပ်သောမဟုတ်လုံလောက်သောမဟုတ်ဖြစ်ပါသည် Persons [များအတွက်လေးစား၏ Humphreys (2015) ; စ။ 102] ။ ထို့ပြင် Persons ကိုလေးစားရုံတစျခုသုတေသနကိုကျင့်ဝတ်ဖို့စဉ်းစားကြသောအခါမျှမျှတတဖြစ်ဖို့လိုအပျသောအခြေခံမူများဖြစ်၏ ဒါကြောင့်အလိုအလျှောက်ကောင်းတဲ့, တရားမျှတမှုနှင့်ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွား, အတိတ်ကာလအနှစ် 40 ကျော် ethicists အားဖြင့်အကြိမ်ကြိမ်ဖန်ဆင်းတဲ့အချက် [များအတွက်လေးစားလွှမ်းမိုးမထားသင့် Gillon (2015) ; စ။ 112-113] ။ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမူဘောင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ထုတ်ဖော်ပြောဆို, အရာအားလုံးအဘို့အသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက် (ပုဒ်မ 6.5 ကိုကြည့်ပါ) ဒီလို Timebomb အဖြစ်အခြေအနေများမှသားကောင်ကျရောက်သည့်အလွန်အမင်း deontological အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျခွင့်ပြုချက်မဆိုကြင်နာမပါဘဲသုတေသနလုပ်ငန်းလုပ်နေတာစဉ်းစားလျှင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့ကိစ္စအဖြစ်, ထို့နောက်သင်မီးခိုးရောင်ဧရိယာ၌နေသောသိသင့်သည်။ သတိထားပါ။ သုတေသီများသဘောတူခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲခွဲခြားဆက်ဆံမှုစမ်းသပ်လေ့လာမှုများပြုလုပ်ရန်နိုင်ရန်အတွက်ဖန်ဆင်းသောကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာငြင်းခုံမှာပြန်ကြည့်ပါ။ သင့်ရဲ့အကြောင်းပြချက်အဖြစ်အားကြီးသောလား? သဘောတူချက်အများအပြား Lay ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာသီအိုရီမှဗဟိုသောကြောင့်သင်ဖွယ်ရှိသင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေခု​​ခံကာကွယ်ဖို့အပေါ်ကိုခေါ်ကြလိမ့်မည်သင်တို့သိရသင့်သည်။